जागरण अभियानले जगाउन सकेन कांग्रेसलाई ? – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
जागरण अभियानले जगाउन सकेन कांग्रेसलाई ?
काठमाडौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्नजागृत ल्याउन सुरु गरेको जागरण अभियान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामै सकिएको छ ।
त्यही प्रावधानलाई टेकेरै महाधिवेशन सार्ने योजनामा देउवा रहेको इतरपक्षको बुझाइ छ । चुनाव लगत्तै जागरण अभियान सञ्चालनका लागि दबाब दिँदा पनि नगरेको र यतिबेला जागरण गर्नु महाधिवेशन नगर्ने बहानाको इरतपक्षको आरोप छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।